Koonfur Galbeed Iyo HirShabelle oo ka horyimid go'aankii Guddiga Xalinta khilaafaadka Doorashooyinka | SAHAN ONLINE
Koonfur Galbeed Iyo HirShabelle oo ka horyimid go’aankii Guddiga Xalinta khilaafaadka Doorashooyinka
JOWHAR – Madaxweynaha maamulka HirShabeele Cali Cabdullahi Cosoble ayaa ka horyimid go’aankii guddiga Xalinta khilaafaadka doorashooyinka ay ku laaleen doorashada 11-kursi oo 2-kamid ah lagu doortay magaalada Jowhar.
Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa sheegay in doorashadii ka dhacday magaalada Jowhar ay u dhacday si caddaalad ah isla markaana aysan jirin cid awood loo sheegtay ama wax lamid ah.
Annagu dadkii aan soo dooraney waan naqaanaa, dad haddii kursiga u suurtageli waayo wax sheegaa wey jiraan, laakiin xaqiiqda waxa ay tahay annaga dadka aan soo saarnay waa dad deegaanka mateli kara oo aan ku qanacsannahay”ayuu yiri
Dhanka kale Guddiga doorashada maamulka Koonfu galbeed ayaa ka horyimid go’aankii shalay ee guddiga khilaafaadka doorashooyinka ku laaleen 11-ka kuis oo aqalka hoose oo shan kamid ah lagu soo doortay magaalada Baydhabo.
Guddiga oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in musharaxiinta laga guuleystay ay dacwadan u gudbiyeen guddiga khilaafaadka balse ka guddi haan ay caddeynayaan in go’aankaas aan dhankooda khuseyn.
Hoos ka akhriso koonfur galbeed qoraalka kasoo baxay